Nei Iyo 'Yakasimba Hunhu' Chiraira Inoda Kuongororazve - Blog
Nei Iyo 'Yakasimba Hunhu' Chiraira Inoda Kuongororazve
“Vakasimba” uye “vasina simba” zvipikisheni zvinokamuranisa mhando dzakasiyana dzemifananidzo yepfungwa nekusarura tingave tichida ivo kana kwete.
Semuenzaniso, munhu anotonga misangano kubasa nekutaura pamusoro pevamwe vanhu vese anogona kutsanangurwa seane hunhu hwakasimba, nepo ivo vachingova chibhakera chekurwa. Kana tichienzanisa, munhu akanyarara uyo anowanzo chengeta maonero avo kwavari kunze kwekunge abvunzwa ivo zvakananga anogona kuwana ruzvidzo rwekuva nehunhu husina kusimba, nekuti ivo havana ruzha kana kuzvisimbisa sepakutanga.
Mavara akadai anoita kusagadzikana kunoshamisa kune vese vanhu ava, nekuda kwezvikonzero zvakati.
Simba Harisi Nguva Dzose Chinhu Chakanaka
Chekutanga pane zvese, izwi rekuti 'kusimba' rinowanzo fungidzirwa kuve rumbidzo: simba hunhu hwakagadzirirwa vanhu vazhinji shuva ku , saka kana mumwe munhu achinzi ane 'hunhu hwakasimba', izvo zvinowanzoonekwa sechinhu chakanaka. Rudzi urwu rwekufunga runogona kusimbiswa muhucheche hudiki, apo mwana anokanda zvinhu uye mabhosi vamwe vana vakatenderedza anomutsa kuseka nekuda kweinonzi simba rehunhu hwake.
Maitiro akadaro, kana akagamuchirwa, anosimbiswa sekugamuchirwa patsika. Vanokanganisa vanoonekwa sevanoshamisira pabasa, uye zviito zvinogona kutsanangurwa se 'zvine ruzha' uye 'zvine hushamwari' muhudiki zvinoshandura kuva 'anosimbisa' uye 'mutungamiri mukuru' kana vakura. Iwe unoziva zvinotungamira kupi? Narcissistic , vanodheerera munzanga vanopunyuka nekubata vamwe vanhu semhedziso sh * t nekuti vagara vachitenderwa kudaro.
Hunhu hwavanoratidza hungangodaro hune chekuita nesimba chairo rehunhu - hunhu hwakadai sekuvimbika , ushingi, kukudzwa, uye kururamisira - uye zvimwe zvine chekuita nekumisikidza nekutyisidzirwa. Zviri kupfuura zvingangoita kuti vanhu vane hukasha vari munzvimbo dzemasimba vasvike ipapo nekuda kwechizvarwa kwete nekukodzera kwavo.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti iyo 'yakasimba hunhu' chitambi chinowanzo shandiswa senge tsananguro inoshoreka painoshandiswa kumukadzi. Kana ichinongedzwa kumushandi wechikadzi, semuenzaniso, iro zita rinogona kureva kuti ane hasha, akaomarara, uye anofunga zvakanyanya, hunhu hunokosheswa mune vezera rake vechirume, asi anozoshorwa paanozviratidza.
Pane zvimwe zvekudya zvekufunga, hmm?
Pane iyo flipside yekugamuchirwa kwetsika ndiko kufunga kwekushaya simba. Funga nezvenzira dzese dzinoshandiswa neshoko rekuti “kusasimba” (kana mazwi anoreva zvakafanana naro) mumazwi ekuzvidza, zvichireva izvo zvisina kunaka. Iyo 'isina kusimba chinongedzo' ndicho chisina basa, chakaputswa chidimbu muketani, uye zvinonzwisisika zvichakonzera zvese kupunzika. Mumwe munhu 'asina kusimba-kuda' anoonekwa seye flake inoshaya kuvimbika uye kugona kumira kunyange nekadiki kakamanikidzwa.
Chii chingaite kuti tifunge kuti munhu haana kusimba, nekuda kwekuti haana ruzha uye nharo?
Avo vakanyarara vanogona kusimba zvakanyanya kupfuura zvaungatarisira. Iye murume anotaura zvinyoro-nyoro mumisangano yebhizinesi anogona kunge akadzidza kuzviita mushure memakore apedza kuchengeta mubereki ane Alzheimer kana mwana ane kunonoka kwakakura kwekukura - anogona kunge akasangana nemamiriro ezvinhu angadai akatyora mumwe munhu, asi akatouya nemumiedzo yake. nenyasha nekukudzwa kwakabatana. Oo, asi akapfava uye anotaura zvakapfava, saka anofanira kunge ari munhu munyoro uye asina kusimba. Rudyi?
Nechiratidzo chimwe chete ichocho, vakadzi vanowanzofungidzirwa kuve nehunhu husina kusimba kupfuura varume nekuti vazhinji havazvisimbise kazhinji kazhinji sezvavanogona. Kana kuti unofanirwa. (Ona kuve kwakaoma uye hasha pamusoro.)
Vanhu vasina udyire uye vanopa panzvimbo pekudaira uye vane udyire vanowanzoonekwa vasina kusimba, uye hunhu hwetsitsi uye kunzwira tsitsi anowanzo nyombwa. Izvo zvinotaura zvakawanda nezvedu setsika, handizvo here? Mune yedu yazvino nzanga nzanga, narcissism uye sociopathic tendency inorumbidzwa uye inoyemurwa nekuda kwesimba ravo, nepo kuzvininipisa nemutsa zvichisekwa.
13 Zviratidzo Une Hunhu Hwakasimba Hunogona Kutyisidzira Vamwe Vanhu
12 Misungo Yekuva Nesimba Hunhu
Mitemo 18 Yemukadzi Akasimba
9 Zviratidzo Iwe Une Hunhu Hwakasimba Hwakashata Asi Iwo Chaizvoizvo Akanaka Anonzwisisa
5 'Negative' Hunhu Hunhu Hunhu Hwechokwadi Hune sirivheri Lining
Simba Uye Kushaya Simba Kazhinji Hazvinei Nekuita
Izvo munhu akaita chaizvo mukati hazvioneke nguva dzose nemabatiro avanozviita.
Funga nezvazvo nenzira iyi: imbwa diki dzinopopota dzinohukura uye kupururudza uye kurovera pamakumbo emunhu wese akavapoteredza nekuti vane hasha kushomeka kunonetsa uye kuda kuratidza kuti vakaomarara sei. Wolfhounds, nekuenzanisa, akadzikama uye akanyarara kunze kwekunge asundidzirwa kune zvakanyanya mamiriro. Havahukuri kana kuchekerera vanhu nekuti havanzwe kudiwa kwekudaro.
Izvo zvakafanana zvinoenda kuvanhu vazhinji: zvidiki (kwete kuti zvivhiringidzwe nezvidiki mupfungwa yemuviri) mabhureki ane machipisi pamafudzi avo anowanzo tenderera kutenderera uye kuita zvese zvavanogona anodheerera vamwe kuitira kuratidza kukosha kwavo. Ivo avo vakachengeteka mukati mavo uye vasiri megalomaniacs vanowanzo gutsikana kunyarara kunze kwekunge vaine chimwe chinhu chakakodzera kutaura. Ivo havana 'kusasimba' ivo vanogutsikana nezvavari uye havanzwe kudiwa kwekupopota uye kumira kuti varatidze kukosha kwavo.
Nguva inotevera paunofunga nezvekutonga hunhu hwemumwe munhu seusina kusimba kana kusimba, tora chinguva kunyatso kuyera nzira iyo iwe yauri kuisa yako fungidziro. Izvo iwe zvaunocherekedza kuve zvechokwadi, uye chiri chechokwadi chaizvo, hazvina hazvo kufanana.
Ngatifungei zvakare zvinyorwa izvo zvatave tichirova vanhu kwenguva refu, uye tione kana tichigona kuuya netsananguro dzakatonyanya kukodzera.
Pamwe pachinzvimbo chekutaura nezve hunhu 'hwakasimba', tinogona kushandisa mazwi akasiyana, zvinoenderana netsananguro dzatiri kuyedza kuratidza. Kana munhu wacho ari shefu mune zvishoma-pane-zvinoshamisa nzira, mazwi akadai se 'kumanikidza' kana 'kutonga' angave akakodzera. Kana maitiro avo achiyemurika, saka 'kusimbisa' uye 'kumanikidza' zvinoshanda zvakanaka kuzvitsanangura.
Saizvozvowo, pane kushandisa 'kusasimba' sechipikisheni kana tisiri kuedza kutsoropodza munhu, tinogona kushandisa mazwi akadai 'akapfava' kana 'ane tsika' kana 'ane nyasha'. Kana isu tiri kuyedza kutsanangura zvishoma-pane-kusimbisa hunhu, pamwe 'zvinokwanisika' kana 'kutya' zvinogona kuvakwanira ivo pachinzvimbo.
mukomana anoda kufona pane mameseji
vamwe vanhu havambowane rudo
havazivi kuti kunzwa uku kwakaita sei
sei kudonha kubva pakuchiva
ane makore mangani trish stratus
sei zvakaipa zvese zvichiitika kwandiri